Posted by Tranquillus | May 15, 2018 | Luqadda shisheeye
Soo koobid: Tilmaan-bixiyaha ugu fiican ee lagu barto Faransiiska.
Baro goobo dhamaystiran oo kala duwan si loola qabsado luuqada Faransiiska
Qiimee luqada faransiiska adoo dooranaya fiidiyaha iyo warbaahinta kale
Ku raaxeyso intaad baranayso Faransiis
Dhameystir sirtaada iyo tareenka si aad uhesho sida farsamayaqaan dhab ah
Baro Faransiis leh dhaqdhaqaaqa thanks thanks apps
Ilaha waxbarashada ee carruurta
Luqadda Faransiiska dhab ahaantii ma ahan wax sahlan in wax laga barto marka ay noo tahay ajnabi. Sababtan awgeed, waxaa laga yaabaa inay caqli gal tahay in lagu tiirsanaado khayraadka Faransiiska ee tayada leh iyo qaar ka mid ah taageerooyinka dabeecadaha kala duwan si ay u bartaan Faransiiska si fudud oo wax ku ool ah.
Waxaad dooneysaa inaad ogaato sida loo barto Faransiiska
Barashada Faransiiska, haddii aysan ahayn luuqadaada hooyo, waxay u baahan tahay hab wax yar ka duwan hababka loo adeegsado Faransiiska. Waxaa muhiim ah in la ogaado xeerarka badan ee naxwaha, gaar ahaan kakanaanta iyo khaasatan luqada Molière.
Sababtu maxay tahay sababta Faransiisku
Faransiiska waa luqad lagu hadlo Yurub, laakiin sidoo kale qaybo kala duwan oo adduunka ah. Faransiiska waa awood caalami ah oo u furan kala duwanaanta dhaqanka balaadhan iyo luuqadeeda waxay bixisaa fursado ganacsi oo kala duwan Yurub, laakiin sidoo kale adduunka intiisa kale. Sidaa daraadeed, xirfadlaha Faransiisku wuxuu noqon karaa hanti dhab ah oo loogu talagalay xirfadleyda dhammaan noocyada kala duwan ee ganacsiga (ganacsiga, maaliyadda, ganacsiga, soo dejinta / dhoofinta, iwm.). Waxay sidaas u furi kartaa tiro albaabada ah oo ka mid ah heerarka iskaashiga ganacsiga iyo sidoo kale qoondeeyn xirfadeed.
Barashada Faransiiska maahan mid sahlan, ardayda ajnabigaa intooda badani waxay ku heshiiyaan halkaan. Dhinaca kale, haddii ay qaadato dadaal badan si loo gaaro tan, waa inaanan dayacin taageero in ay suurtagal tahay helitaanka ilaha Faransiiska ee laga heli karo internetka.
Sidee loo aadaa luuqada Faransiiska?
Barashada luqad cusub waxay guud ahaan muujinaysaa helitaanka aasaas adag oo isku xiran, tan iyo luuqada Faransiisku ay ku jirto marar badan, oo leh farqi ballaaran oo marmar ah. Ugu dambeyntii, Faransiis waa erayo aad buu hodan u luqadda kaas oo bixiya fursado badan si ay erayo ciyaaro, inay haleelaan ay macnaha iyo ku isticmaasho weedho iyo qoraallada ee noocyada kala duwan. Dareemid waa raaxo dhab ah.
Si aad u barato Faransiiska, waxaa suurtogal ah in lagu tiirsanaado khayraadka si loo helo aqoonta lagama maarmaanka u ah in uu barto luqadan. Internetku waa qalab weyn marka loo isticmaalo barashada iyo barashada mawduucyo badan. Iyadoo la adeegsanayo barashada Faransiisku waxay noqon kartaa xal aad u xiiso badan, xitaa haddii khayraadka kale ee kale ay sidoo kale ka ciyaari karaan kaalin muhiim ah iyo mid dhammeystiran.
Iyada oo la adeegsanayo xulashooyinka bogagga, waxaa suurtogal ah in la ogaado dhammaan dhinacyada luqadda Faransiiska sida naxwaha, erayada, ereyada ama mabaadi'da isku dhafka. Meelahani waxay bartilmaameedsanayaan maadooyinkooda iyo ilaha Faransiiska ee ardayda waaweyn.
Bogga Bonjour de France wuxuu siiyaa dadka isticmaala Internet-ka gogol xaashiyo waxbarasho oo diyaar u ah in la isticmaalo lagana faa'iideysto. Ka dib ayaa loo soo bandhigi karaa ardayda ama si fudud ayey ugu shaqeyn karaan si madaxbannaan si ay si fiican ugu milmaan dhinacyada kala duwan ee luuqadda Faransiiska iyada oo ay ugu wacan tahay qeybaha aad u kala duwan ee horumarka: bilowga, dhexdhexaadka, ismaamulka, horumarsan iyo khabiir. Faylasha ayaa aad u tiro badan waxayna bixiyaan habab shaqo iyo jimicsi noocyo kala duwan leh oo loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda inay horumar gaaraan.
Le Point du FLE (Faransiis Language Dibadda) waxay bixisaa kun oo links si ay u bartaan Faransiis, laakiin sidoo kale si ay u baraan dadka kale. Layliyo, casharada, imtixaanka, aasaaska ... Waxaa suurto gal ah si ay u helaan khayraadka tayada oo dhamaystiran barashada French dhex maadooyinka kala duwan iyo casharada si xirfad leh loo qaabeeyay by takhasusay luqadda. Dood-qab ah mowduucyo ayaa ku jira. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxaa la xiriira qoyska, midabada, qaababka, jidhka bini'aadamka, cunto, shaqo iyo dunida xirfadeed, images, taariikhda iyo wax ka badan. Boggan waa mid aad u dhamaystiran oo aad u hodan ku ah khayraadka af Faransiis.
Sida magaciisu soo jeediyo, Conjugueur soo jeediyay by Figaro wuxuu u ogolaanayaa in ay isku xiraan ficil kasta oo Faransiis ah, iyo si fudud loo helo dhammaan shuruudaha, dhammaan waqtiyada iyo hababka jira. Waa taageero aad u wanaagsan kuwa doonaya inay soo saaraan qoraallo faransiis ah, ama waxay bartaan kala duwanaanta kooxaha kala duwan ee ficilada. Bogguna wuxuu sidoo kale bixiyaa isku midka ah si loo kobciyo erayada iyo fahamkiisa fahamka luqadda Faransiiska. Intaas waxaa dheer, dadka isticmaala Internetka waxay baran karaan Faransiis iyagoo luuqada, naxwaha iyo qorista hingaadka. Ugu dambeyn, waxay sidoo kale ka heli karaan ciyaaraha iyo helitaanka kulan si ay ula xiriiraan dadka kale oo is caawiyaan.
Inkasta oo muuqaalkeedii hore aan caadi ahayn iyo waxoogaa murugo leh, bogga Faransiiska Easy Easy wuxuu leeyahay kheyraad aad u wanaagsan oo lagu baran karo faransiiska iyo naxwaha oo dhan. Faahfaahinta la bixiyay waa mid aad u cad oo si kufiican loogu habeeyey dhamaan heerarka barashada luuqada Faransiiska. Jimicsiyo badan ayaa la siiyaa dadka isticmaala oo waxaa weheliya hagaajin faahfaahsan. Waxay isticmaali karaan dadka isticmaala si looga caawiyo inay fahmaan khaladaadkooda iyo asalka ay ka soo jeedaan. Waa qalab aad u fiican oo ah inaad si joogto ah u shaqeyso iyo horumar.
Kheyraadka Internetka waa goob Yurub ah oo ujeedadeedu tahay in lagu hormariyo barashada luuqadaha casriga ah ee ku yaalla Yurub. Khayraad badan ayaa lagugu soo dejin karaa goobta. Intaa waxaa dheer, buugaag kala duwan ayaa loogu talagalay barashada Faransiiska iyo arrimaha dhaqamada kala duwan. Waxay u ogolaataa in la ogaado booska Faransiiska ee ku yaala Midowga Yurub, isagoo isku dhejinaya dhaqanka dalka iyo luqaddiisa. Tani waa khayraadkii ugu fiicnaa ee loogu talagalay kuwa leh xirfadaha luqada Faransiiska ee sare.
Bogga internetka ee Faransiiska waxaa loogu talagalay ardayda raadinaya qalab waxtar leh ee barashada is-barashada. Sidaa daraadeed, waxay heli karaan khayraadka lagu qeexay heerarka iyo layliyada la rabo. Waxaa ka mid ah, waxaa suurtagal ah in la helo qaar ka mid ah qorista Faransiiska, akhriyaan qoraalo ama xitaa hadla iyo dhagaystaan ​​jumlado. Talooyin waxbarasho ayaa laga heli karaa goobta, iyo sidoo kale hawlo kala duwan iyo qalabyo waxqabad leh. Ugu dambeyntii, bogga waxaa kale oo uu bixiyaa isku xidhka ilaha iyo dukumiintiyada dhabta ah ee aad u faa'iido leh barashada Faransiiska iyo dhammaystirka aqoonta qofka.
French.ie waa bog ah wararka iyo barbaarinta luqada faransiiska. Waxaa soo saaray Safaaradda Faransiiska ee Jamhuuriyadda Ireland, iyada oo lala kaashanayo Jaamacadda Maynooth iyo Wasaaradda Waxbarashada ee Irish. Inkasta oo ay ugu horayn waxaa loogu talagalay caawiyeyaasha af Faransiis, waxa ay sidoo kale ku siin kara macluumaad iyo cilmiga ilaha muhiim u ah ardayda English raadinaya si ay u bartaan Faransiis waraaqaha khuseeya iyo wax ku ool ah.
Waa barxad lagu baranayo luqadaha kala duwan. Waxaa ka mid ah xoolo ah content luqadda sida qoraalka iyo audio, iyo sidoo kale qalab ah ee erayada ku bartaan sida jimicsi, qaamuusyo, la socodka helay ... Tutors xataa bixiyaan kulammo chat iyo macaamiishu waxay hagaajinaysaa isticmaalayaasha mashiinada.
Haddii aad tahay qof jecel casharrada gaarka loo leeyahay laakiin marar badan waad niyad jabtay. Diyaargarowga ayaa kuu badbaadin doona waqti iyo lacag. Miirayaasha kaladuwan ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato macallinka riyadaada. Si aad u xiiso badan haddii aad raadineyso macallin ku hadla luqaddaada hooyo.Waxaad sidoo kale, kuxirantahay helitaankaaga, ku tababaran kartaa waqti hore ama aad u soo daahay.Qiimaha sicirka waxaa jira wax loogu talagalay dhammaan miisaaniyadaha.Qiimaha ugu qaalisan maahan kuwa ugu fiican
READ Hagaha Habboon ee ugu Fiican Habboon Jarmal
Goobta Franc-Parler waxay ujeedadeedu tahay inay bixiso markhaatiyaal ka yimaada akhristayaasha ku hadla luuqada Faransiiska iyo kaaliyayaasha macallimiinta, iyo sidoo kale talooyin ku saabsan helitaanka dukumiintiyo waxtar u leh barashada luuqadda Faransiiska. Waxaa soo saaray macallimiin Faransiis ah oo ka socda Ururka Caalamiga ah ee La Francophonie. Warar, talo, waraaqo waxbarasho: ilo badan oo aad u kala duwan ayaa si toos ah looga heli karaa boggan aadka loo tixgeliyo.
EduFLE.net waa goob wada shaqeyn loo sameeyay macallimiinta iyo ardayda FLE (Faransiis ahaan Luqad Shisheeye). Waa suurtagal in la helo warbixinno tababar ah, maqaallo wax ku darsadayaasha iyo sidoo kale faylal wax ku ool ah. Bogga EduFLE.net wuxuu kaloo martigaliyaa warside bil walba laga cusbooneysiiyo xarunta dukumiintiyada waxbarashada Dimishiq. Warqadan waxaa lagu magacaabaa " TICE-ment adigaa iska leh Waxaana keenaa macluumaad badan oo faa'iido leh dadka booqanaya goobta.
Marka lagu daro casharo iyo layliyo, waxaa kale oo suurtagal ah in laga faa'iideysto khayraadka muuqaalka iyo dhawaaqa si ay u bartaan Faransiis. Podcasts, video, flashcards ... Meelo ay bixiyaan ilo kale ayaa badanaa oo guud ahaan aad u habboon. Waxay si gaar ah u oggolaanayaan in ay si kale u qabtaan luuqada.
Bogga Podcastfrancaisfacile labadaba waa mid miyir leh, habaysan oo aad u cad. Waxay u ogolaaneysaa inay bartaan qodobbada muhiimka ah ee naxwaha leh oo leh sharraxaad Faransiis ah. Isticmaalayaasha internetka ayaa si sahlan u riixa badhanka "ciyaarta" si ay faylka codka ah u bilaabaan si toos ah iyo sharraxaadaha la bixinayo oo la siinayo qadar qunyar-gaab ah oo loogu talagalay ardayda. Fahamka sharaxaad waa mid aad u muhiim ah, sidaa darteed Faransiis ah loo isticmaalo si ay u sharxaan casharada waa mid fudud oo ku haboon nooca gorfaynta dhegeysiga. dhinacyada ugu badan ee afka la soo shaqeeyay karaa sida Fal, sifooyin, ama hadal toos ah la sheegay, XIDHAYAASHA, tibaaxaha, isbarbardhiga ...
Waxaa loo isticmaalaa in lagu barto Faransiiska, goobta YouTube waxay cadeyn u tahay inay tahay kheyraad aad u fiican. Xaqiiqdii, daraasiin fiidiyow ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala internetka in ay ka faa'iideystaan ​​sharaxaadda macalimiinta iyo dadka kale ee asal ahaan Faransiis ah. Khayraadkani waa mid ku habboon kuwa doonaya in casharradan lagu sharaxo hadal ahaan halkii qoraal ahaan. Intaas waxaa dheer, dadka isticmaala Internetka waxaa si joogta ah loogu casumay inay ku shaqeeyaan af iyo waxay ka faa'iideystaan ​​tusaalooyinka dhabta ah ee ereyada iyo erayada Faransiiska. Fiidiyowyada waxaa si joogta ah loogu soo daabici doonaa dhexdhexaadkan, oo firfircoon sanado badan oo hadda ah waxaana raacaya malaayiin dad ah.
Barta TV5Monde waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee barashada Faransiiska ee aan ahayn carruurta iyo dhallinyarada, laakiin sidoo kale ardayda qaangaarka ah. Runtii, degelku aad buu u ballaadhan yahay. Gaar ahaan, waxay bixisaa ilo qoraal ah, is-dhexgal ama aan ahayn, iyo sidoo kale fiidiyowyo ku saabsan maadooyin kala duwan. Mararka qaarkood waxaa lagu soo bandhigaa qaabka Webdocs, waxay kuu oggolaanayaan inaad barato Faransiiska adoo adeegsanaya warbixinnada fiidiyowga ee dhacdooyinka hadda jira. Sheekooyinka kala duwan waxaa la wadaaga dadka ku hadla Faransiiska waxayna fiidiyowyadu ku habboon yihiin fahamka dadka baranaya luuqadda Faransiiska.
Goobta xasuus-qorka ah waxay bixisaa flashcards kala duwan oo aad u fudud si loo xusuusto oo aad loo jeclo. Waxaa loogu talagalay inay ku taageeraan dadka isticmaala internetka barashada luqada Faransiiska iyagoo siinaya qalab muuqaal leh oo wacan, oo cad oo fudud si loo xasuusto. Tani waa goob loogu talagalay dadka doonaya inay bartaan Faransiiska si fudud, oo leh tusaalooyin riwaayado iyo fududaan si loo fahmo. Intaa waxaa dheer, naqshadeynta iyo naqshadeynta ay bixiso bogga waa mid aad u fiican. Khayraadka Faransiisku waa la daabici karaa oo meel kasta loo qaadi karaa.
Le Point du FLE waa xog-ururin ballaaran oo bixinaysa marin u helka ilaha badan ee luuqadda Faransiiska ee ka imanaya warbaahinta kala duwan. Natiijo ahaan, dadka isticmaala internetka waxay heli karaan waxyaabaha qoran, laakiin sidoo kale waxay ku maqli karaan af Faransiis. Noocyo dhowr ah oo jimicsi ah ayaa u oggolaanaya iyaga inay fahamkooda afka ah geliyaan imtixaanka: naxwaha, higgaadinta, eraybixinta ama laylisyada ku dhawaaqidda. Boggan waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee lagu barto Faransiiska oo aad ka heli karto internetka waxaana loogu talagalay ardayda heerarka oo dhan iyo waddammada oo dhan. Waxay ku saabsan tahay dhammaan dhinacyada luqadda.
Mareegta loo yaqaan "raaxada barashada" waxaa abuuray CAVILAM Vichy, oo sidaas darteed France. Waxay siisaa dadka isticmaala Internetka iyo ardayda leh kheyraadyo badan oo Faransiis ah sida waraaqaha waxbarasho. Hadafkoodu waa inuu sahliyo ka faa'iidaysiga ilaha farsamooyinka kala duwan sida filimada, heesaha, raadiyaha raadiyaha ama koorsooyinka internetka. Hadafkoodu waa inuu abuuro layliyo farsamo oo Faransiis ah. Khayraadkani waa kuwo aad u faa'iido leh kuwa doonaya in ay bartaan Faransiis si buuxda madaxbannaan waxayna leeyihiin heer sare oo ku qoran luqaddan.
Macallimiinta luuqadaha shisheeye guud ahaan waxay isku raacsan yihiin in qaamuusyada ay yihiin qalabyada ugu wanaagsan ee barashada. Xaqiiqdii, waxay suurtogal u tahay inay raadiyaan erayada Faransiiska kuwaas oo macneheedu yahay ama qeexitaankayaga naga khuseeyo, iyo dhammaan suurtogalka suurtogalka ah. Sidaa darteed, gundhigyada inta lagu jiro wada sheekeysiga, fiidiyowga ama, qoraal ahaan, waa la baran karaa. Sidaa awgeed, macnaha macnahooda waa la fahmi karaa. Online, waxaa jira qalab badan oo loogu turjumo ereyo. Waxay bixiyaan qeexitaan cad, laakiin sidoo kale u oggolow erayada in lagu dhigo jumlado si ay u fahmaan macnaha ay u leeyihiin. Khayraadkani waa mid ku habboon ardayda doonaya inay u safraan Faransiiska ama Faransiis ku hadla iyagoo aan ka walwalin gorgortan qoraal ah.
Si ay u sii wadaan dhiirigelinta iyo sii wadaan dadaalkooda, barashada luuqada Faransiiska waa inay ahaataa mid farxad leh iyo madadaalo joogto ah. Qaar ka mid ah boggaa waxay bixiyaan barashada Faransiiska oo leh hal-abuur, qosol yar iyo taabashada nalka. Ka helista madadaalada helitaanka Faransiisku waxay kaloo caawineysaa in ay la qabsato.
Goobta Faransiiska eLearning waxay bixisaa barashada naxwaha Faransiiska oo bilaash ah waxayna sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad barato tibaaxaha caamka ah ee luqadan. Isticmaalayaasha internetka waxay ka heli karaan heeso iyo flashcards si ay u bartaan Faransiis si kale, xiiso badan iyo xiiso leh. Qaar waxay la yaabi doonaan oo ay kufilmayaan si ay u ogaadaan ereyada caanka ah ee inta badan lagu isticmaalo Faransiiska iyo wadamada Faransiiska ku hadla!
Websaydhka BBC channel wuxuu bixiyaa fursado badan oo loogu talagalay si loo fududeeyo barashada Faransiiska. Waxay bartilmaameed mid ka mid ah qaybaheeda carruurta, waxayna u ogolaataa dadka isticmaala inay ku shaqeeyaan, akhriyaan ayna u arkaan maadooyin badan oo Faransiis ah. BBC wuxuu isku darsaday raaxada helitaanka wargelinta iyo warka waqtiga ee la socota barashada afka Faransiiska. Ciyaaro badan ayaa loogu talagalay dadka waaweyn iyo sidoo kale TVyada & raadiyaha si ay u fahmaan wararka ku qoran luqadaha kala duwan. Khayraadka waxaa sidoo kale lagu heli karaa naxwaha, erayada iyo macallimiinta luqadda Faransiiska ee luqad shisheeye ah. Goobtani waa mid aad u dhameystiran oo sidaas awgeed waxaa loogu talagalay noocyada kala duwan ee ardayda luqadda.
Si aad u baratid Faransiiska inta aad xiiseyneysid waa ujeeddada bogga loo yaqaan "Ortholud". Ciyaaraha jimicsiga iyo layliyada si joogto ah ayaa loo dhigaa internetka waxayna u oggolaadaan kuwa bixiya habka madadaalada ee barashada luuqada Faransiiska. Goobtan cusubi waxay la xiriirtaa mawduucyo badan oo ka baxsan warbaahinta iyo warar aan caadi aheyn. Wuxuu casuumaa akhristeyaashiisa si uu u waydiiyo su'aalo u ogolaanaya faham kale ee qoraallada la soo jeediyay. Tani waxay ku fiican tahay dadka isticmaala internetka kuwaas oo doonaya in ay fahmaan dhammaan dhinacyada luqadda adigoo isticmaalaya ilaha Faransiiska asalka ah iyo kuwa kala duwan.
READ Maxaad u baraneysaa luqad cusub?
Barashada Faransiiska, sida luuqad kasta oo kale, had iyo jeer maahan wax xiiso leh. Sidaa darteed, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la is waafajiyo xasilloonida iyo nasashada iyo ka shaqeynta afka. Taas awgeed, ma jiraan wax la mid ah ciyaaraha xiisaha leh iyo waxqabadyada. Natiija ahaan, barta TV5Monde waxay bixisaa qayb gebi ahaanba loogu talagalay ciyaaraha oo waliba bixiya nashaadaadyo sida su'aalaha iyo qabashada ereyada. Dhammaan agabyadan waxaa lagu waafajiyay heerar waxbarasho oo kala duwan: bilow, hoose, dhexe iyo sare. Marka, dhammaan isticmaaleyaasha Internetku way horumari karaan iyaga oo aan dareemin.
Ka dhig France
Thanks to boggeeda "Faransiiska iyo adiga", bogga Caawinta Faransiiska waxay bixisaa dadka isticmaala internetka ciyaaraha xiisaha badan iyo jimicsiyada si ay u adeegsadaan aqoontooda luqada Faransiiska. Waxay bixisaa waqtiga QCMs, ciyaaraha loo yaqaan "Roger parachute" ama "joojinta tareenka", laakiin sidoo kale waxqabadyo kale. Dhammaantood waxay cayaaraan oo ciyaaraan, sidaas awgeedna waxay u ogolaadaan inay si fiican ugu qanciyaan ciyaartoyda iyo ardayda luqadda Faransiiska. Waxaa ka mid ah qoraallada si ay u dhamaystiraan, ereyada si ay u dejiyaan, sheekooyinka si loo ogaado iyo waxqabadyo kala duwan.
Boggani waa blog oo leh ulajeedooyin waxbarasho oo loogu talagalay tababarayaasha FLE. Ilaha ay bixiso waxay sidoo kale faa'iido u leedahay ardayda Faransiiska leh heer sare oo ku filan. Mareegtu waxay isticmaashaa hab gaar ah oo jilicsan iyo jimicsi. Waxay bixisaa dhaqdhaqaaqa gaaban oo leh dukumintiyo dhab ah iyo warbaahinta shaqada oo kala duwan. Ilaha cusub ayaa si joogto ah loogu soo dhajiyaa internetka, taas oo ardayda u oggolaanaysa in ay si dhakhso ah u horumariyaan ayna bartaan farsamooyinka barashada ee waxtarka leh toddobaadyada.
Aqoonta sida loo qaabeeyo jumlada Faransiiska iyo fahmidda bayaannada ay sameeyeen dadka kale waa laba fikradood oo si buuxda uga mid ah barashada Faransiiska. Laakiin ardayda doonaya inay bartaan luqaddaan waa inay sidoo kale ka shaqeeyaan Faransiiska. Waxay ku hadlaan ereyada, odhaahaha iyo weedhaha waa muhiim. Meelo kala duwan iyo ilaha internetka lagu dhigo waxay suurtogal u tahay in ay ka shaqeeyaan qodobkan muhiimka ah.
Mar labaad, goobta TV5Monde waxay u taagan tahay saxnaanta waxa ku jira iyo tayada ilaha loo bixiyo barashada Faransiiska. Xusuus-qorro kala duwan ayaa la heli karaa dhammaantoodna waxaa la socda fiidiyow si gaar ah loogu talagalay ku dhawaaqida dhawaaqa. Sidaa darteed, ardayda luqadda Faransiiska waxay si fudud u fahmi karaan su'aasha ah hanashadooda lahjadda Faransiiska iyo dhawaqyada kala duwan ee jira. Kaararkaani yaryar waxay leeyihiin faahfaahin badan. Way fududahay in la fahmo oo la heli karo heerar kasta.
Faransiisku waa luuqad aad u adag oo la isku halleyn karo, loona jimicsado kasta oo faa'iido leh. Ka shaqaynta ereyada erayada waa mid aad muhiim u ah markaad rabto inaad barato Faransiiska oo aad naftaada fahamto Francophones. Bogga "Phonetic" sidaas darteed waxay bixisaa dadka isticmaala internetka si ay uga shaqeeyaan waraaqaha kala duwan ee xarfaha alfabeetada iyo afkooda. Jimicsiyada waa in lagu qabtaa is-barashada. Waxay bartilmaameedsanayaan inay ka caawiyaan ardayda inay bartaan dhawaaqyada dhawaaqyada gaarka ah ee Faransiiska.
Bogga Flenet waxaa kale oo loogu talagalay ardayda Faransiiska ee luqad shisheeye ah. Waxay ku dhejineysaa ilo fiidiyoow iyo fiidiyowyo badan. Hadafku waa inuu u oggolaado inay ka shaqeeyaan ereyadooda iyo dhawaaqyada dabeecadda Faransiiska. Sidaa darteed, waxay leeyihiin fursad ay ku dhameeyaan lahjadda. Waxay ku shaqeyn karaan heeso, qoraalo, barnaamijyada raadiyaha, wada sheekeysiga ama xitaa cod bixinta. Kala duwanaanta mawduuca waa hanti barta internetka.
Acapela waa goob loogu talagalay in lagu qoro qoraallada qoraalka ah ee Faransiiska. Waxay u ogolaataa ardayda inay dhagaystaan ​​qoraalka ay qoraan. Sidaa darteed, waxay haystaan ​​fursad ay ku shaqeeyaan kelmadaha iyo weedhaha ay ku doortaan xawaaraha iyo fududaanta. Bogguna wuxuu sidoo kale u rogaa fiidiyowga iyo waxyaabaha la isku dhexgalo.
Tripod waa goob loogu talagalay koorsooyinka farsamo oo loogu talagalay ardayda bilowga ah. Jimicsiga uu geliyo internetka waa mid isdhexgal ah oo ka faa'iideysta jawaabaha gaarka ah. On this site, waxaa suurtagal ah in ay ka shaqeeyaan qaybo kala duwan. Wuxuu ka shaqeeyaa shaqada dhawaaqa Faransiiska iyo fahamkiisa gaarka ah.
Boggani wuxuu bixiyaa layliyada codka isdabamarin ee ardayda oo dhan. Bogga waxay sidoo kale ku xiran tahay jaamacada hormuudka ah ee Hong Kong. Isticmaalayaasha Internetku waxay heli karaan foomam kala duwan. Waxay sidaas u baran karaan dhawaaqyada Faransiiska, shaqooyinka sanka. Laakiin sidoo kale isweydaarsiga, xidhiidhada, shibbanaha, dhaleecooyinka shaqooyinka ... Ujeedada goobta ayaa ah inay bixiso koorsooyin dhamaystiran oo ku saabsan muusiga xarfaha, erayada iyo dhawaaqa laga helo luqadda Faransiiska. Xaashid kasta waxaa loo qaybiyaa jimicsiyo badan oo dhamaystiran oo u oggolaanaya waxbarashada qoto dheer ee lahjadda Faransiiska.
Marka lagu daro bixinta fiidiyowyo fiidiyow ee luqadda Faransiis, bogga YouTube waa taageero aad u wanaagsan oo ku saabsan barashada luuqada Faransiiska si ka fiican. Laakiin sidoo kale si loo hagaajiyo lahjadiisa. Kaliya baaritaan ku samee codka, isku xirnaanta ama waraaqaha loogu talagalay. Ka dib, dadka isticmaala si fudud ayaa u heli karaa dhammaan noocyada fiidiyowga ee mawduuca. Sidaa darted, waxaa suurtogal ah in lala shaqeeyo tusaalooyin bandhigyo. Si kastaba ha ahaatee waa lagama maarmaan in la tixgeliyo waxyaabaha la aqoonsan yahay oo ay keenayso silsilado halis ah. Laakiin YouTube, waxbarashooyinka ku jira meeshan ayaa guud ahaan si fiican loo qorsheeyey.
Codsiyo badan ayaa ku soo koray adduunka. Dad badan baa bixiya si ay u bartaan luqado kala duwan oo leh fudayd iyo farxad weyn. Waxaa ka mid ah codsiyada loogu talagalay barashada luuqada Faransiiska. Qaar kalena waxay ku bixiyaan Faransiis oo ka mid ah liisaska waaweyn ee luuqadaha shisheeye
Babbel waa codsi la yaqaan oo loo adeegsado adduunka. Waxay bixisaa barashada Faransiiska sida luqado kale oo badan. Isticmaalayaal badan ayaa ka mahadceliya codsigan. Waxay badanaa siiyaan isaga oo ah heerka ugu wanaagsan iyo faallooyinka. Codsiga wuxuu bixiyaa casharro ay soo saareen khabiirada afka Faransiiska. Waa suurtogal in la helo barnaamijyo wax ku ool ah oo muhiim ah iyo sidoo kale sahlanaanta isticmaalka. Waxaa laga heli karaa labada Android iyo iOS, iyo barnaamijyo buuxa maaha lacag la'aan. Si kastaba ha noqotee, aad ayay u buuxsantay waxayna horumarin kartaa meelkasta oo aad u dhaqso badan. Marka loo eego dadka isticmaala, maalgashadaan yar yar waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan.
Voltaire Projeta sidoo kale waa codsi lagu kobciyo luuqada Faransiiska. Waxay u hoggaansantaa dadka isticmaala barashada qawaaniinta naxwaha badan. Waxa kale oo laga heli karaa dhamaan qalabka moobaylka (taleefannada casriga ah iyo kiniinnada). Websaydh ayaa dhammeystirtay codsigan. Ugu dambeyn waxaa sidoo kale loo yaqaan "Voltaire Project". Codsigan wuxuu bixiyaa hababka gaarka ah ee tababarka Faransiiska. Waxa kale oo ay bixisaa casriyeynta ardayda u baahan inay ka soo baxaan waxa ay barteen. Dhinaca kale, waxay si joogto ah u helaan fikrado aad u wanaagsan oo laga helo dad badan.
(Codsiga Iphone, Android, Windows Phone)
READ Hagaha Habboon ee Habboon ee Barashada Isbaanishka
Codsiga wata magaca "Cordial" wuxuu bixiyaa casharro Faransiis ah oo si caddaalad ah u gaar ah oo bilaash ah. Taa baddalkeeda, waxay ku wajahan yihiin kuwa u barta luqad shisheeye. Sidan oo kale, waxay ka dhigan tahay ilo ku habboon barashada Faransiiska oo leh dhaqdhaqaaq iyo waxqabad. Cordial wuxuu u qaybsan yahay laba codsi: labaduba waxay bixiyaan koorsooyin luuqada faransiiska ah, oo leh qiyaastii XNUMX nashaad iyo jimicsi. Abku wuxuu xoojinayaa codadka. Waxay u oggolaaneysaa ardayda inay ku shaqeeyaan ku dhawaaqiddooda ereyada, tibaaxaha iyo weedhaha Faransiiska. Barnaamijyada ay bixiso waa kuwo aad u dhameystiran. Waxaa laga heli karaa qalabka moobiilka (kiniiniyada iyo taleefannada gacanta).
(Codsiga Iphone, Android)
"Conjugation" waa, sida magacu tilmaamayo, codsi ujeedkiisu yahay inuu ku nuuxnuuxsado aqoonta la xidhiidha dadka isticmaala. Isku xidhnaanta waa mid ka mid ah dhinacyada ugu adag ee la baro marka uu isku dayo inuu barto Faransiis. Fikradaha aan caadiga ahayn, shuruudaha, isku dhafka taariikhda, isbeddelka foomka magacan ... Kuwani waxay inta badan yihiin qayb ka mid ah dhibaatooyinka ardayda ay la kulmaan marka ay doonayaan inay bartaan luuqada ajnebiga ah sida Faransiiska. Macluumaad badan ayaa la heli karaa. Waxay ka hadlaan hababka (calaamad muujin, hoosjirnimo ...), wakhtiyada, codka baddalka ah ama codka firfircoon, kooxaha iyo foomamka. Guud ahaan waxaa weheliya layliyo isku dhafan oo kala duwan si ay u fuliyaan aqoonta fekerka ee lagu soo bandhigay codsiga.
Qaamuuska Larousse ee telefoonka gacanta
Ardayda qaarkood waxay noqon karaan safar, socdaal ama joogitaan Faransiis. Waxay kaloo booqan karaan waddan Faransiis ku hadla. Xaaladdan, waa caadi in la helo ereyo aan la aqoonsan karin. Ama si loo fahmo ereyada qaarkood. Xaaladdan, waxaa laga yaabaa inay faa'iido u leedahay in lagu helo ereyga keligiis, kaliya tani marwalba ma ahan kiiska. Ereyga Larousse ee ku saabsan moobiilka, waxay isticmaali karaan dhammaan noocyada macluumaadka ku saabsan ereyada ay raadinayaan. Erayada isku midka ah, ereyada caanka ah, ereyada la xidhiidha. Waa qalab fiican oo lagu sii wadi karo "feker ahaan Faransiis". Laakiin sidoo kale marka qofku doonayo in uu kaamilaado ereyga qof walba iyo meel kasta oo adduunka ah.
Codsiga "Hagaajinta Faransiiska"
Codsigan wuxuu ku saleysan yahay buugga Jacques Beauchemin wuxuuna bixiyaa in ka badan laba boqol oo cashar oo Faransiis ah. Waxa kale oo ay bixisaa dhowr nooc oo ah imtixaannada isdhexgalka oo la heli karo marka la eego qaabka tartanka. Malaayiin dad ah ayaa hore u soo dejiyey app, kaas oo si joogto ah u hela dib u eegid wanaagsan iyo faallooyin. Taasina waxay sabab u tahay qaab-dhaqameedkooda, laakiin sidoo kale tayada casharrada la bixiyay iyo sida ay u fahmayaan. Waa qalab aad u fiican ardayda luuqada Faransiiska iyo heerarka oo dhan.
Internetku waa dhexdhexaad awood badan siinaya helitaanka qalab aad u xiiso badan oo lagu barto luuqada Faransiiska. Qaarkood waa guud, halka qaar kalena ay bixiyaan tilmaam dheeraad ah oo la bar tilmaameedsanayo oo ku saabsan naxwaha, erey bixinta ama isku xirnaanta. Billow, dhexdhexaad ama xaqiijin: heer kasta ayaa la tixgeliyaa. Iyo qaar ka mid ah ilaha macluumaadka ayaa sidoo kale si weyn u qadarin doona ardayda da'da yar ee luuqada Faransiiska.
Goobtan waxaa loogu talagalay carruurta ku dhow inay tagaan Faransiiska ama dalka Faransiiska ku hadla. Wuxuu keenaa aqoon badan oo akhriya, dhagaysta iyo saamiyada saamiyada si ay u bartaan Faransiis ku saabsan mawduuca socdaalka. Jimicsiyada foomka su'aalaha iyo jawaabaha waxay u oggolaan karaan kuwa ugu yar inay ku bartaan akhriska iyo fahamka Faransiiska inta ay ku ciyaarayaan madadaalo.
Mashruucan aad u hodan ee jimicsiga wuxuu ugu horreyn u yahay carruurta doonaya inay bartaan Faransiis waxayna ku raaxaystaan ​​khayraadka tayada leh. Xirfado dhowr ah ayaa loo shaqeyn karaa sida akhrinta qoraallada, dhageysiga content, qorista ama afka Faransiiska. Dhaqdhaqaaqyada ayaa had iyo goorba horumar ka sameeya afartan xirfadood, sidaa darteedna waxaa loo qaabeeyey awoodaha iyo heerka ilmo kasta. Naqshadeynta goobta waa madadaalo, laakiin sidoo kale waa mid aad u fudud in la qaato gacanta ugu yar. Waxqabadyada waxaa lagu qiimeeyaa 1 ilaa 4 taasoo ku saleysan heerkooda adag. "Dhibcood luqadeed" ayaa loo diyaariyey carruurta si ay u caawiyaan marka ay la kulmaan dhibaatooyin. Waxay samayn karaan iyaga ka hor ama ka dib jimicsiga, sida ay rabaan ama baahidooda.
Hawlaha Faransiiska ee fudud
Boggan kale waxaa sidoo kale loogu talagalay dhalinyarada doonaya inay bartaan Faransiiska oo leh layliyo iyo ciyaaro xiiso leh. Waxay ku tababaran karaan hadba heerkooda: "fudud", "dhexdhexaad" ama "kuwa wax dawarsada". Waxay u oggolaaneysaa carruurta inay ciyaaraan ciyaaro kala duwan oo ay bartaan aasaaska luqadda Faransiiska sida midabada, bilaha, xayawaanka… Qaniimada mowduucyada ayaa u oggolaanaysa dhammaan carruurta inay ka shaqeeyaan maadooyinka iyaga khuseeya oo xiisaynaya si ay horumar u gaaraan dhakhso badan.
Bogga TV5Monde wuxuu u qoondeeyey bar barashada luuqadda Faransiiska carruurta da'doodu tahay saddex illaa laba iyo toban. Barnaamijyo badan ayaa loogu talagalay kooxo da 'kala duwan ah sida 4-6 jir, ama 5-7 sano jir. Waxay si gaar ah ula jaanqaadi karaan dhacdooyinka hadda jira waxayna bixiyaan nooc kasta oo mawduucyo ah oo guud ahaan ay carruurtu ku qancaan. Casharro fiidiyoow ah ayaa loo fidiyaa iyaga, heeso, layliyo isbarbardhig madadaalo ah iyo sidoo kale hawlo kale oo kala duwan oo xiiso leh.
Bog kale oo ka mid ah TV5Monde waxaa loogu talagalay dhallinyarada ka socota 13 illaa 17 sano. Waxa intaa dheer in sahlida barashada luqadda Faransiiska, website-ka hadlaya mawduucyo kulul sida news, mashaariic, tartamada, kuwii gabayaaga ahaa fransiiska ee xilligan inay soo jiitaan oo ay qabsadaan dhallinyarada ah.
Tani waa goob carruurta iyo leedahay design fudud in la heli karo. layliyada waa kala duwan iyo oggolaadaan carruurta si ay u bartaan Faransiis dhex kulan oo jimicsi loogu talogalay gaar ahaan iyaga loogu talagalay. Waxa kale oo ay kala soocin ah in is-dhexgal, kaas oo u ogolaanaya ilmaha si aad u maqasho weedhaha iyo akhriyo si loo horumariyo fahamka markooda weedha iyo macnahooda ay. mawduucyo badan ayaa ka wada hadlay sida midabo, tirooyin, warqado, qoyska, xayawaanka, da'da, qalabka dugsiga, cimilada, sheekooyinka, jidhka bini'aadamka, gaadiidka, damacyadii, iyo kuwo kale oo badan . Waxaa xitaa macquul ah si ay u soo bixi songs yihiin in ay dhegeystaan ​​iyo shaqeeyaan warbaahinta kale.
waraaqaha on this site yihiin natiijada shaqada ka iskaashi ka dhexeeya xirfadlayaal kala duwan Faransiis sidii af qalaad ah (FLE), sida macallimiinta iyo ardayda. Tani waa set oo ah khayraadka in caruurta kala soo bixi kartaa, print, cut, isku laab ama Jinka. Khayraadkani waxay bixiyaan barashada xiisaha leh ee luqadda Faransiiska. kulan oo kala duwan ayaa laga heli karaa sida kulan Lotto, xusuusta, Wehbe ciyaarta, ciyaar board a, domino kale ... Ujeeddada khayraadka iyo carruurtu keenaan si ay u isticmaalaan Faransiis ah si ay isgaadhsiin iyo ciyaaro hareeraha dhaqdhaqaaqyada xiisaha iyo xiisaha leh.
Si aad si dhakhso ah u hesho macnaha ereyga, caruurtu waxay u jeedsan karaan mashiinka caanka ah ee caanka ah ee Google iyo adeegga turjubaanka. Dhammaantood waa inay sameeyaan erey aan la aqoon ama weedh ah oo ku qoran Faransiis waxayna ku helayaan turjubaan afkooda hooyo. Haddii adeeggu si joogto ah u wanaajiyo, waxa kale oo uu soo saari karaa turjumaad xumo iyo marin-habaabin. Waa sababtaa in ay wanaagsan tahay in la tarjumo erayga keligiis oo aan ahayn gebi ahaanba xukunka. Turjumadu waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhakhso ah u barto macnaha erayga.
Tilmaamaha si loo helo khayraadka ugu fiican ee lagu baran karo Faransiis Juun 16th, 2021Tranquillus
horeTalooyinka 7 ee Qiimaynta Xirfadaha Guud
socdaKoox shaqo oo wanaagsan